Filtrer les éléments par date : dimanche, 22 mars 2020
dimanche, 22 mars 2020 22:50
Vavatenina RN5: Nametraka « barrage sanitaire » hisorohana ny fihanaky ny Covid-19
Misy ny fakana hafanana an’ireo mpandeha rehetra avy any Toamasina miditra ny tanànan’i Vavatenina, nanomboka androany alahady 22 marsa 2020. Hihatra mandritra ny 15 andro, andro aman’alina, io fepetra io, ho fisorohana ny fihanaky ny Covid-19.
dimanche, 22 mars 2020 22:47
La Réunion: 64 ireo voan’ny coronavirus
Tamin’ny alarobia 11 marsa 2020 no nahitana voalohany olona voan’ny coronavirus tatsy amin’ny nosy La Réunion. Nisy tranga 17 hita androany, ary dia tafakatra 64 ireo voan’ny coronavirus ao amin’ity nosy ity.
Ao amin’ny efitra fameloman’aina ny roa amin’ireo, iray efa sitrana. Tsy mbola nisy kosa namoy ny ainy tamin’ireo narary.
dimanche, 22 mars 2020 22:35
Coronavirus: Roa namoy ny ainy, hampihatra ny « couvre-feu sanitaire » ny nosy Maorisy
Nanao fanambarana ny praiminisitra maorisiana Pravind Jugnauth, nandritra ny valandresaka ho an’ny mpanao gazety nataony androany hariva fa tafakatra roa ny olona namoy ny ainy noho ny coronavirus, ka teratany maorisiana ity faharoa ity, maty androany na dia notsaboina aza.
Nambarany ihany koa, fa hihatra ao amin’ity nosy ity, ny « couvre-feu sanitaire » manomboka rahampitso alatsinainy 23 marsa 2020 amin’ny 8ora alina ka hatramin’ny alakamisy 2 aprily amin’ny 8ora alina.
Miisa 24 izao ny olona voamarina fa voan’ny coronavirus ao Maorisy.
dimanche, 22 mars 2020 22:31
Ambanja RN6: Nametrahana « barrage sanitaire » mivoaka sy miditra ny tanàna
Napetraka eo amin’ny Pont Sambirano sy eo amin’ny Fokontany Ambalavelona ny « barrage sanitaire » roa mivoaka sy miditra ny tanànan’i Ambanja, Faritra DIANA ho fisorohana ny fihanaky ny valanaretina coronavirus.
Ao amin’ny « Gare routière » efa vita fa tsy mbola niasa eo amin’ny Fokontany Mahavelona no hanaovana fanokana-monina ireo olona mafana hoditra, isany fambara Covid-19, mandritra ny fitsapana hafanana azy eo amin’ny « barrage sanitaire ».
Tsy mankasitra io fepetra io anefa ny mponina ao amin’io Fokontany io.
Mikoropaka ny olona taorian’ny nandrenesana ny fanambarana nataon’ny filoham-pirenena fa misy olona voan’ny coronavirus eto Madagasikara, ny alin’ny zoma teo. Omaly sabotsy, ampitson’io fanambarana io, dia niakatra 700 Ariary ny kapoakan’ny vary teny an-tsena.
dimanche, 22 mars 2020 19:11
Fitaterana RN5: Niakatra avo roa heny ny sarandalana amin’ny zotra rezionaly
Mandositra coronavirus, milefa any ambanivolo ny olona. Manararaotra ny hamaroan’ny mpandeha ireo mpitatitra amin’ireo zotra rezionaly mampiasa ny lalam-pirenena faha-5 miala avy eto Toamasina.
Tamin’ity alahady 22 marsa 2020 ity dia lasa 20 000 Ariary ny sarandalana Toamasina-Fenoarivo Atsinanana, raha 10 000 Ariary izany omaly.
Niakatra ho 30 000 Ariary ny sarandalana Toamasina-Soanierana Ivongo, raha 15 000 Ariary teo aloha.
Nanjary 40 000 Ariary ny sarandalana Toamasina-Vavatenina androany alahady raha 20 000 Ariary teo aloha.
Le Président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, a proclamé le soir du 21 mars 2020, l’ « état d’urgence sanitaire » sur tout le territoire de la République de Madagascar pour une durée de 15 jours. Et ce afin de prendre les mesures nécessaires pour limiter l’expansion de l’épidémie due au Coronavirus.
Ce qui s’est passé durant toute la journée du 15 mars 2020, quelques heures après la déclaration du Président de la République que 3 personnes rentrées de l‘étranger sont positives au test du Covid19 déclencha une certaine hystérie collective en ruant sur les étals des magasins et autres boutiques. Avec en contrepartie un envol des prix entre 3 et 5 fois plus pour certains fruits que les marchands profitant de la situation ont fait.
N’oublions pas aussi que les agents de l’Etat venaient de recevoir leur salaire comme on l’a vu avec les queues devant les distributeurs de billets des agences bancaires.
dimanche, 22 mars 2020 17:42
Coronavirus: Mihato ny fandraisan'ny ministeran'ny Fanajariana ny Tany sy ny Asa Vaventy ireo mpanjifa
Ho fiarovana ny tsy hiparitahan'ny tsimok'aretina Covid19 dia mihato manomboka ny alatsinainy 23 marsa, mandritra ny 15 andro, ny fandraisan'ny ministeran'ny Fanajariana ny Tany sy ny Asa Vaventy ireo mpanjifa manerana ny Nosy.
(Loharanom-baovao Ministeran'ny Fanajariana ny Tany sy ny Asa Vaventy)
dimanche, 22 mars 2020 17:41
Coronavirus: « Tsy misy ahiana ny ain'ireo olona telo mitondra ny Covid-19 »
« Tsy misy ahiana ny ain'ireo olona telo voamarina fa mitondra ny tsimokaretina coronavirus. Ho ampitaina amintsika miandalana eto ny vaovao mikasika ny fahasalaman'ireo mpandeha izay araha-maso ireo », hoy ny fampitam-baovao nataon’ny ministeran’ny fahasalamana ny tolakandro teo.
Io ilay antsoinay hoe : « ‘En bonne santé apparente’, tsy misy ‘fièvre’, tsy mikohaka fa salama tsara izy ireo » hoy Rafalimanantsoa Armand, Talen’ny DVSSER (Direction de la Veille Sanitaire et de la Surveillance Épidémiologique et Riposte) eo anivon’ny ministeran’ny fahasalamana.
dimanche, 22 mars 2020 17:13
Centre Opérationnel Covid-19": io no hamoaka ny antontanisa rehetra ofisialy momba ny tranga ahiahiana, ny tranga voamarina, ny isan'olona marary…
Hitsangana manomboka rahampitso alatsinainy ny "Centre Opérationnel Covid-19" izay handrindrana ny fanatanterahana ny fepetra rehetra momba ny fisorohana ny fiparitahan'ny valan'aretina Coronavirus eto Madagasikara.
Tapaka nandritra ny famorian’ny Praiminisitra lehiben’ny governemanta Ntsay Christian, ny OMC National (Organe Mixte de Conception National) androany maraina, teny Mahazoarivo ny hananganana an’ity "Centre Opérationnel Covid-19" ity, izay hanana ny foibe toerany eny amin’ny Mining Business Center Ivato – Antananarivo.
Avy ao amin'ny "Centre Opérationnel Covid-19" no hivoaka ny antontan'isa rehetra ofisialy momba ny tranga ahiahiana, ny tranga voamarina, ny isan'olona marary, sy ny fivoarany … manomboka ny alatsinainy 23 marsa 2020. Nambaran'ny Praiminisitra Lehiben'ny Governemanta fa « atao anaty mangarahara tanteraka » ny famoahana izany vaovao izany.
Nahitana valonan-javatra mifono lambatsilena miloko manga tao anaty tsikafona sy fako, teo amin’ny Cité Canada-Toamasina androany maraina. Mifatotra toa faty olona voafono halevina ny fahitana azy ivelany.
Nikoropaka ny olona, betsaka koa no niahiahy sao vonoan’olona niniana natao, na koa olona matin’ny valanaretina no nisy nanary. Nisy nampandre ny BMH ao amin’ny fiadidiana ny tanànan’ny Toamasina sy ny Polisy. Tonga teny an-toerana nanao fitsirihana ilay fonosan-javatra ireto farany. Efa nitangorona ny olona, te hahalala ny zava-misy marina. Niparitaka tamin’ny tambazotran-tserasera facebook rahateo ny sary.